I-Bay Beach Villa, i-Ground Floor Suite
Grand Baie, Rivière du Rempart District, i-Mauritius
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Benoit
Igumbi langasese le-En Suite esitezi esiphansi se-Large Villa ogwini lolwandle e-Grand Bay.
Igumbi liyimfihlo ngokwedlulele, linedamu lokucwila emnyango walo, ichibi elikhulu lomphakathi kanye noLwandlekazi i-Indian Ocean okuqhele ngamamitha angu-20 kuphela nolwandle olunesihlabathi esimhlophe.
Igumbi ukuphela kwegumbi e-Villa elisesitezi esiphansi elivumela ukuthi libe yimfihlo ngokwedlulele, elinechibi lokucwila emnyango walo, ichibi elikhulu lomphakathi kanye noLwandlekazi i-Indian Ocean amamitha angu-20 kuphela ukusuka ekamelweni.
Lolu uhlu olubuyekeziwe lwamagumbi aku-Villa ngemva kwezinkinga nge-akhawunti yokuqala, futhi amakhasimende angaphambili ayeneliseke ngokwedlulele. Sicela ubone ukubuyekezwa ngaphakathi kwezithombe nezilinganiso.
Leli yigumbi lesibili elivulwe eVilla ukuze liqashwe umnikazi, ngemva kokuba igumbi lokuqala libe yimpumelelo enkulu futhi libe nokubuyekezwa kwezinkanyezi ezi-5 kuphela.
Igumbi libanzi ngokwedlulele futhi lisezingeni lehhotela, okuhlanganisa nombhede wegwebu lenkumbulo elilingana nenkosi eyengeziwe, ikhabethe elikhulu nedeski. Igumbi lokugezela elivulekile le-en suite linobhavu ozimele, osinki abaphindwe kabili, ishawa yokukhanya kwesibhakabhaka kanye nendlu yangasese ehlukene. Igumbi lihlanganisa nesiqandisi, igedlela, okokusika kanye netiye nekhofi okuthokomele uma ufika. I-Villa iyikhaya lika-Benoit futhi inamagumbi amabili ngaphakathi kwe-Villa ehlala Izivakashi, elilodwa liphansi futhi elinye lisesitezi sokuqala, womabili angasese kakhulu. I-Villa ihlanganisa indawo yokuhlala evulekile evulekile kanye nekhishi lesimanje elinazo zonke izidingo ezihlanganisa umshini wekhofi we-Nespresso izivakashi ezikhululekile ukuwusebenzisa, kanye nendawo yevulandi enethezekile enezihlalo. I-Villa ihlanganisa nabasebenzi abahlanza ikamelo lakho nsuku zonke elifakwe phakathi nendawo ohlala kuyo (ngaphandle kwangeSonto nangeholide Lomphakathi) nganoma yisiphi isikhathi ngaphambi kuka-11am.
Igumbi lakho lihlanganisa ilineni eliphezulu lombhede, i-duvet nemicamelo, amathawula okugeza ekhwalithi namathawula amakhulu olwandle amahhala ukuwasebenzisa, kanye nesiqandisi somuntu siqu ekamelweni lakho.
Igumbi lingaphakathi kwe-4 Bedroom Villa enamakamelo amabili nje asetshenziswa izivakashi, elinye lihlala mina ngokwami umnikazi, kodwa wonke ahlukene kakhulu. I-Villa inkulu futhi igumbi lakho lomuntu siqu lingamamitha-skwele angama-30 cishe
I-Villa isendaweni eyinhloko emaphakathi ne-Grand Bay, enezindawo zokudlela ezingenakubalwa phakathi nemizuzu yokuhamba, imigoqo, ukuvakasha kweziqhingi kanye nokuthenga okuhle.
Isuphamakethe enkulu iseduze futhi amanye amabhishi amahle kakhulu esiqhingini ngaphakathi kwemizuzu emi-5 yokushayela, kanye nolwandle oluyimfihlo emnyango wakho.
U-Benoit usokhaya utholakala ezihambelini zonke izikhathi zakusihlwa lapho esekhaya, futhi izisebenzi zasendlini zilapha ukuze zisize usuku lonke.